Visual Webhusaiti Optimizer: Wedzera Kutengesa uye Shanduko | Martech Zone
Visual Webhusaiti Optimizer chiri A / B chishandiso chekuyedza iyo inobvumidza nyanzvi dzekutengesa kuti dzigadzire dzakasiyana mawebhusaiti avo uye mapeji ekumhara vachishandisa poindi-uye-tinya mupepeti wobva waona kuti ndeipi vhezheni inogadzira yakanyanya kutendeuka chiyero kana kutengesa. Visual Webhusaiti Optimizer zvakare inoshanduka multivariate kuyedza software (yakazara mafekitori maitiro) uye ine huwandu hwezvimwe zvekushandisa senge hunhu hunonongedza, heatmaps, kushandisika kuyedzwa, Etc.
A / B yokuedzwa - Nezviratidzo gadzira akasiyana mavhezheni ewebhusaiti yako neinongedzo-uye-tinya interface.
Kuongorora Kwakawanda - Nzwisisa kuti ndedzipi shanduko pane yako webhusaiti zvine basa zvakanyanya nekugadzira shanduro uye nekucherechedza chaiyo nguva yekuita mishumo
Kupatsanura URL Kwayedza - Split traffic pakati peshanduro dzakasiyana uye iwe unogona kuyera kuti ndeipi inoshanda zvakanyanya.
Maitiro & Geo Targeting - Gadzirisa yako webhusaiti kana peji rekumisikidza zvinoenderana nemushanyi wega wega kuti awedzere kutengesa.
Heatmaps & Clickmaps - Fungidzira uko vashanyi vako varikutsvaga pane akasiyana bvunzo kusiyana. Heathermaps anokuratidza kune vashanyi vako varikudzvanya uye kwavasiri.
Usability kuyedza - Kana iwe uchida A / B yekuyedza mazano uye uchida kuwana mazano ekuvandudza ewebhusaiti yako kana mapeji ekumhara, bvunza vashandisi veInternet kubva pane yedu pani.
Gadzirira Nhare dzeTable & Tablet - Kana iwe uine mapeji ekumhara kana ewebhu mapeji akanyatso gadzirirwa ma mobiles uye mahwendefa, iwe unogona ikozvino kuzvimisikidza iwo mune mupepeti unoteedzera iwo mafoni nemapiritsi.
Visual Webhusaiti Optimizer ine zvese zviri zviviri WYSIWYG (Zvaunoona NdoZvaunowana) kana HTML mupepeti uye chishandiso chinogona kutumirwa pasina kudiwa kweIT kutumirwa ... ingo wedzera kodhi kodhi uye wagadzirira kuenda. Mapulagi anoita kuti zvive nyore kusanganisa chikuva neAnalytics, Zvemukati Management Sisitimu (kusanganisira WordPress) uye Ngoro dzekutenga.
Tags: ab testadobe sitecatalysthunhu hunonongedzaclickmapsclickydrupalkunongedzera geogeotargetinggoogle analyticsheatmapsJoomlaMagentomobile optimizationmultivariate kuyedzakupatsanurwa kuedzaHwendefa optimizationkushandisika kuyedzwawingifyWordPress